Indawo ehlaziyiweyo yembali embindini weBrno
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguDenisa
Yenza ukuhlala kwakho eBrno kube ngamava akhethekileyo!
Indlu enamagumbi amathathu ebanzi igcina umoya wayo wokuqala nasemva kokulungiswa. Ibekwe kufutshane neLužánky - eyona paki inkulu eBrno - kwaye kwangaxeshanye kumgama wokuhamba kwiziko lembali kunye neVilla Tugendhat.
Indlu inamagumbi okulala amathathu, ngalinye linabantu ababini. Umthamo omkhulu ngabantu abayi-6. Igumbi ngalinye lixhotyiswe ngedesika yomsebenzi kunye nesitulo kunye nesifuba sedrowa. Amagumbi amakhulu anezitulo ezitofotofo. Uqhagamshelo lwe-intanethi olungenazingcingo ngumcimbi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngesitovu sombane, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Kukho izitya kunye nezinye izinto zokupheka.
Ngombulelo kwizinto ezityebileyo zococeko, le ndlu inokuhlala ngokukhululekileyo ukuya kwiindwendwe ezintandathu. Igumbi lokuhlambela elikhulu lineesinki ezimbini, ibhafu kunye nendlu yangasese. Kukwakho neshawari eyahlukileyo kunye nenye indlu yangasese eyahlukileyo. Kukho enye isinki eholweni.
Ngokuqinisekileyo ndincoma uLužánky! Unokuhambahamba nje epakini, udlale intenetya okanye usebenze kwinkundla yangaphandle. Abantwana banokuzihlaziya kwibala lokudlala ngeempawu zamanzi. Ehlotyeni, yiba ne-ayisikrimu evela kwi-Divine Hill - imoto yabo yokudlala ipakishwe kufutshane nesakhiwo esikhulu.
Ungaya kwiziko lokutya, kukuhamba ngemizuzu esi-7 ukusuka kwigumbi lokuhlala. Ukuba uyifumana kakhulu, yiya kwiFabrik Food Factory kwi-Náměstí 28. října 20.
Ukuba uyathanda ubugcisa kunye noyilo, iVilla Löw-Beer / iTugendhat ikwindawo ekufutshane kwaye kufanelekile ukutyelelwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Denisa
Ndiyafumaneka kwiiNdaba zika-Airbnb okanye ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brno-střed